किन दूरी बढ्दै छ प्रचण्ड र विमलेन्द्र निधिको ? यस्तो छ कारण - Medianp.com
किन दूरी बढ्दै छ प्रचण्ड र विमलेन्द्र निधिको ? यस्तो छ कारण
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ०७, २०७३१०:१०0	काठमाडौं, ७ चैत । यतिबेला कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि चौतर्फी प्रहारमा परेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्ने कांग्रेस नेता निधि एमाले, मधेसी मोर्चा, राप्रपा र माओवादी केन्द्रकै निशानामा परेका छन् ।
त्यसमा पनि खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र निधिको सम्बन्ध चिसिँदै जान थालेको छ । नौ महिनाअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री छोडिदिने सहमति गरेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड अहिले एमाले र राप्रपाको कित्तामा पुगिसकेको उनको गतिविधिले देखाएको छ । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सल्लाहमा उपप्रधानमन्त्री बनाएका प्रचण्डले वरीयतामा पनि पहिलो नम्बरमा राखेपछि सरकारको आयुमै संकट उत्पन्न भएको छ ।
निधि भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेका बेला एकाएक थापालाई उपप्रधानमन्त्रीको पहिलो वरीयतामा राखेका थिए । सो कुरा निधिले आइतबार मात्र थाहा पाएका थिए । उनले तत्कालै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूको बैठक राखेर प्रचण्डको रवैयाप्रति कडा चुनौती दिने बताएका थिए । जुन कुरा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत जानकारी गराइसकेका छन् ।
‘यदि नौ महिनाअघि निधि र माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले सक्रियता नदेखाएको भए प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनथे । तर अहिले एकाएक प्रचण्डले निधिलाई पर राख्दै कमल थापालाई च्यापेपछि उनी कसबाट सञ्चालित छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने । उनका अनुसार कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व छाड्नुपर्ने भयले प्रचण्डले कमल थापालाई उप्रधानमन्त्रीको पहिलो वरीयतामा राखेका हुन् ।
यही घटनाले आफ्नो अपमान भएको भन्दै कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिए एमालेलाई सरकारमा सामेल गराउने भित्री डिजाइन प्रचण्ड, ओली र कमल थापाबीच भएको बालुवाटार उच्च स्रोतले जानकारी दियो । एमालेलाई सरकारमा सामेल गराउने र कांग्रेसलाई बाहिर राख्ने तयारी प्रचण्डले दुई महिनाअघि ओली निवास बालकोट र हात्तीवनस्थित नारायणकाजी श्रेष्ठ निवासमा भएको छलफलपछि नै थालेकोमा कांग्रेस नेताहरू बेखबर छैनन् ।
बालुवाटारको गोप्य सूचना बालकोटमा
आफूलाई हटाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बालुवाटारमा आफ्नो सूचना संयन्त्र परिचालन गरेका थिए । सोहीअनुसार बालुवाटारमा भएका हरेक गोप्य र महत्वपूर्ण बैठक र छलफलको सूचना तत्कालै बालकोटस्थित ओली निवासकहाँ पुग्ने गरेको छ । जसको भेउ धेरै समयपछि उपप्रधानमन्त्री निधिले पत्ता लगाएका थिए ।
लामो समयको अनुसन्धानपछि प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले नै ओली निवासमा सूचना पुर्‍याउने गृहमन्त्री निधिले थाहा पाए । त्यसपछि उनले तत्काल प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यसबारे जानकारी गराए ।
नेपाल पत्रकार महासंघको आगामी महाधिवेशनमा आचार्यलाई सभापतिको प्रलोभन देखाएर ओलीले सूचना लिने गरेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । निधिले ओलीकहाँ सूचना पुर्‍याउने गरेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदा पनि उनले त्यति वास्ता नगर्नुको मुख्य कारण भविष्यमा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने प्रचण्डको नियत रहेछ भन्ने कुरा निधिलाई उपप्रधानमन्त्रीको दोस्रो वरीयतामा राखेपछि खुलेको छ, स्रोतले भन्यो ।
आइसफल पदमार्गमा पूर्वाधार थप गरिँदैनारायणीमा हाम्फालेका सैनिक जवान अझै भेटिएनन्, महिलाको सकुशल उद्धार